आखिर मायाको अगाडि कसैको केहि लागेन ; हजुर’बुबा र नातिनीको उमेरका यी जोडी एका’एक भाईरल बने (हे’र्नुहोस् भिडियो) – Taja Khawar
आखिर मायाको अगाडि कसैको केहि लागेन ; हजुर’बुबा र नातिनीको उमेरका यी जोडी एका’एक भाईरल बने (हे’र्नुहोस् भिडियो)
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन ०९, २०७८ समय: १३:१६:२०
सामाजिक सञ्जालमा आजभोली अनौठो लाग्ने घ’टना सार्वजनिक हुन्छन् । अस्व’भाविक लाग्ने वैवाहिक जोडीको अनौठो कहानीलाई मनोरञ्जनका रुपमा प्रस्तुत गरिएका हुन्छन् । तर उनीहरुको भित्रि पी डा भने देखाइदैन । सामाजिक सञ्जालमा भ्युज पाउन अस्व’भाविक देखिने कुरालाई नै रोमान्टिक पारामा प्रस्तुत गरिएको हुन्छ । तर उनीहरुले त्यस्तो अस्व’भाविक निर्णय किन लिए ? त्यसको पछाडीको कारण के हो ? भन्ने कुरा भने आउँदैन ।
सामाजिक सञ्जालमा सेलिव्रटी बन्ने गरेका कतिपय जोडीका वारेमा वास्तविकता धेरै पछि मात्र खुल्छ । वखत विष्ट र उनको जोडीका विषयमा अहिले त्यस्तै कुरा सार्वजनिक भएको थियो । मिडियामा सेलिव्रटी वनेपछि उनीहरुले चर्चा पाउनकै लागि जोडी बनेको बताएका थिए । अहिले लक्ष्मी र प्रधानको जोडी पनि सार्वजनिक भएको छ । अन’मेल विवाह गरेका यो जोडीलाई युट्युवले सेलिव्रटी बनाएका छन् । दुवै जना माग्दै हिड्ने क्रममा भेट भएको र संगै बस्ने निर्णय गरेको लक्ष्मीले बताएकी छन् ।
वजारमा माग्दै हिँड्दा भेट भयो, अनि माया बस्यो लक्ष्मीले भनिन्, म माग्न गइरहेकी थिए उ पनि हाँदै आयो र कान्छी तिमी कता हिँडेकी भनेर सोधे, म नबोली हिँडे । त्यतीनै बेला प्रधानले पनि भने, मलाई मन परेको थियो त्यही भएर सुरुमै देख्दा नै आफै बोल्न गएँ । यिनलाई पहिले देखि नै मन परेको थियो तर मलाई घरकाले अर्कैसंग विवाह गरिदिएका थिए । तर त्यो श्रीमतीले मलाई छोडेर हिँडी । म फेरी यिनलाई नै खोज्दै हिँडे । चार पांच महिना खोज्दै हिँड्दा पनि नभेटिदा म निकै निरास भएको थिए । उनले भने, मलाई राती घरवाट निकालीदिएका थिए । त्यही बेला वर्षाको वेला मैले यिनलाई देखेँ । हेर्नु’होस् भिडियो:-
Last Updated on: July 24th, 2021 at 1:16 pm